Hoa mười giờ: ý nghĩa, chỗ mua, cách trồng và chăm sóc | Hatgiongtihon.net - trung tâm cung cấp hạt giống tí hơn
Hoa mười giờ: ý nghĩa, chỗ mua, cách trồng và chăm sóc | Hatgiongtihon.net
Đang Đọc: Hoa mười giờ: ý nghĩa, chỗ mua, cách trồng và chăm sóc | Hatgiongtihon.net in Hatgiongtihon.net
Intyatyambo yentsimbi yeshumi okanye intyatyambo yentsimbi yeshumi yintyatyambo encinci ehlala ikhula ecaleni kwendlela kwiilali zaseVietnam, ngumfanekiso owaziwa kakhulu kwaye osondeleyo. Namhlanje, intyatyambo yentsimbi yeshumi ithandwa kakhulu yaye iyaziwa ngentsingiselo yayo enzulu yokomfuziselo. Nangona kunjalo, ngaba uyayazi indlela yokutyala nokunyamekela iintyatyambo zentsimbi yeshumi? Masifumanise nge-KHBVPTR kanye ngezantsi.
1 Iimpawu zeentyatyambo zentsimbi yeshumi
1.1 Intsomi yentsimbi yeshumi
1.2 Iintyatyambo zentsimbi yeshumi
2 Intsingiselo yeentyatyambo ezilishumiyure
2.1 Ifanekisela uthando oluthembekileyo, i-lipstick
2.2 Kufuzisela amandla abukhali, ahlala ejonge kwikamva
3 Indlela yokukhulisa iintyatyambo ngentsimbi yeshumi kwibhotile yeplastiki
3.1 Ukuzala njani
3.1.1 Ukutyala ngembewu
3.1.2 Ukutyala ngokusikwa
3.2 Ubuchwephesha bokukhula kwiibhotile zeplastiki
4 Indlela yokunyamekela iintyatyambo kwiiyure ezilishumi ezintle unyaka wonke
4.1 Ukukhetha umhlaba wokutyala
4.3 Ukubekwa kwemithi
4.4 Ukuthena amasebe
4.5 Ukuthintela izinambuzane
4.6 Vuna imbewu ukuze usasaze
5 Apho ukuthenga iintyatyambo ngentsimbi yeshumi?
Iimpawu zeentyatyambo zentsimbi yeshumi
Intyatyambo yentsimbi ye-10, eyaziwa ngokuba yintyatyambo encinci okanye intyatyambo yomntwana, yintyatyambo ehlala eMzantsi Melika kwaye ihlala ikhula kwiindawo ezinengca kwiilali zaseVietnam. Intyatyambo yentsimbi yeshumi inegama lezenzululwazi elithi Portulaca grandiflora, igama lesiNgesi sisityalo seLanga kwaye lelosapho lwe-purslane. Igama lentyatyambo livela kuphawu lwale ntyatyambo edubula ngo-8 – 10 am ehlotyeni.
Intyatyambo yentsimbi yeshumi yintyatyambo enohlaza, enencasa, isityalo sonyaka ekulula ukusikhulisa. Umthi unobude obungange 10 – 30cm, unamasebe amaninzi, isiqu sipinki esiluthuthu, sishwabene. Amagqabi anombala oluhlaza okhanyayo, amancinci, anentsiba kwaye ngaphandle kwe-serrations, amagqabi ahlala e-symmetrical kumasebe e-trunk.
Iintyatyambo zentsimbi yeshumi zihlala zikhula kwiindawo eziphezulu kunye ne-axillas yamagqabi, amaqabunga ahlanganiswe, amaqabunga athambileyo anemibala eyahlukeneyo: i-pink, iphuzi, imhlophe, ibomvu, … kwaye xa iintyatyambo ziqhakazile (malunga ne-10). kusasa).) Ikwabengezela ngezitameni zegolide ngokungathi ihombisa imvelaphi eluhlaza yamagqabi.
Intsimbi yeshumi luhlobo lwentyatyambo edla ngokukhula endle kwithafa lengca, yintyatyambo edla ngokudubula ehlotyeni (malunga nentsimbi yeshumi kusasa), ayinyamezeleki ingqele, isityalo sidla ngokufa ebusika, kwaye sithanda ukufuma.
Intsomi yentsimbi yeshumi
Ibali libonisa ukuba kwilali ethile, usibonda wawungumhlolokazi owakhulisa okuphela konyana wakhe. Efunkile, umntwana uye waba yinkwenkwe entle, esempilweni edla ngokunceda abantu elalini, ngoko wonke umntu uyamthanda.
Kwada kwayimini enye, inkwenkwe yadibana nentombazana enobuhle obumsulwa, abazali abangenabazali, kwaye bobabini bathandana. Ngokufuthi zihamba elunxwemeni, zihamba kunye kwiinduli ezigqunywe yingca eluhlaza, yaye usuku nosuku, rhoqo ngentsimbi ye-10 zidibana ukuze zidlale phambi kolwandle oluluhlaza. Kwakubonakala ngathi uthando alusoze luphele.
Nangona kunjalo, ngenye imini, inkwenkwe ayizange ize kwidinga, intombazana iyodwa yalinda usuku kunye neveki. Wayefuna ukubaleka ukuze amfumane, kodwa wayesoyika ukuba angafika aze angamboni, ngoko wazibamba waza waqhubeka elindile. Wade akasenawo amandla okuphefumla okokugqibela.
Kamva, umzimba wakhe wathwalwa ngamaza wasiwa elwandle waza wazika kulwandlekazi olukhulu. Indawo awayewele kuyo yayivelisa intyatyambo emfusa eqaqambileyo yaza yadubula rhoqo ngentsimbi yeshumi, ifumana imitha yelanga eshushu. Ngoko ke, abantu bafanisa le ntyatyambo ukuba ibe ngumfanekiso wentombazana yolo thando nokunyaniseka. Nangona ixesha lihambile, ukunyaniseka kwakhe kule nkwenkwana akukaguquki, usalindele lowo amthandayo yedwa.
Iintyatyambo zentsimbi yeshumi
Okwangoku kwiimarike kukho iintlobo ezininzi ezahlukeneyo: intsimbi yeshumi, ishumi eliluhlaza okwesibhakabhaka, ishumi lase-australia … Nangona kunjalo, ngokusekelwe kwimvelaphi, intsimbi yeshumi eVietnam iquka ezi ntlobo zilandelayo eziphambili:
Iintyatyambo ngentsimbi yeshumi eThailand
Yintyatyambo enezikhondo ezincinci, ezinamagatsha amaninzi, ezinencasa, ezinamagatsha kunye neenaliti ezininzi eziluhlaza mnyama. Iintyatyambo zentsimbi yeshumi zaseThailand zineentyatyambo ezinkulu, iipetali azibonakali, i-stamens ephuzi.
Intyatyambo yaseJapan yentsimbi yeshumi
Intsimbi yeshumi okanye intsimbi yeshumi inamaphiko amakhulu, igama lezenzululwazi yiPortulaca oleracea L, luhlobo olunobubanzi obuyi 0.6cm, iintyatyambo zidla ngokudubula entlakohlaza kwaye zihlala kude kube phakathi ekwindla. Iintyatyambo zaseJapan ze-10 zentsimbi zihlala zikhula enye kwisiqu, zikwazi ukukhula kunye nokuphuhlisa kwiimeko zodongwe oluqinileyo, isondlo esibi.
Intyatyambo yentsimbi yeshumi yaseMelika
Intyatyambo inegama lenzululwazi elithi Portulaca Grandiflora, inzalelwane yaseMzantsi Melika, ikhule kumazwe anemozulu epholileyo. Olu luhlobo lwentyatyambo enamaphiko amancinci, kuphela i-1-2 imigangatho yamagqabi, ukunyamezela okulungileyo kwembalela.
Intsingiselo yeentyatyambo ezilishumiyure
Intyatyambo yentsimbi yeshumi ayintle nje kuphela kodwa ikwathandwa ngabantu abaninzi ngenxa yentsingiselo yayo enzulu yokomfuziselo. Noko ke, asingabo bonke abantu abazazi zonke iintlobo zeentyatyambo zentsimbi yeshumi kwanentsingiselo yentyatyambo yentsimbi yeshumi. Masifumanise nge-KHBVPTR kanye ngezantsi:
Ifanekisela uthando oluthembekileyo, i-lipstick
Umfanekiso wentombazana elinde umthandi wakhe ukuba aphelelwe amandla de amandla akhe aphelile kwibali le ntyatyambo liye labonisa intsingiselo yalo, akunjalo? Luthando oluthembekileyo, olunemibala ye-lipstick intombazana enalo kwisithandwa sayo. Nangona kungaziwa ukuba lo mfana usigcinile na isithembiso sakhe, le ntombazana ayizange ibambe nqala kodwa yayinentliziyo enye kuye.
Yingakho intyatyambo yeshumi ithathwa njengophawu lothando olungunaphakade, uthando oluthembekileyo lwesibini.
Kufuzisela amandla abukhali, ahlala ejonge kwikamva
Umfanekiso wentyatyambo encinane ngentsimbi yeshumi, ifikelela kumbindi wentsimi yeentyatyambo zasendle ukuze idubule, idubula ezona ntyatyambo zintsha. Nangona intyatyambo encinci, inamandla amakhulu, yiloo nto intyatyambo ye-10 iphinda igqalwe njengomqondiso wobomi obunzulu, inkolelo ehlala ijonge kwikamva, kubomi obuhle.
Indlela yokukhulisa iintyatyambo ngentsimbi yeshumi kwibhotile yeplastiki
Okwangoku, intyatyambo yentsimbi yeshumi sisityalo esiqhelekileyo esifumaneka ecaleni kwendlela emaphandleni ngemibala emininzi eyahlukeneyo. Nangona kunjalo, unokusasaza izityalo zokutyala ukuxhoma endlwini ukunceda ukuhombisa indawo yakho yekhaya. Nantsi indlela yokukhulisa isityalo esineentyatyambo ezininzi onokuthi ubhekisele kuzo:
Intyatyambo yeeyure ezili-10 idla ngokusasazwa ngokusika okanye imbewu. Ngokuxhomekeke kwimo engqongileyo, unokukhetha iindlela ezahlukeneyo zokusasaza:
Ukusasaza iintyatyambo zentsimbi yeshumi ngembewu, kufuneka ulandele la manyathelo angezantsi:
Intsimbi yeshumi yintyatyambo ethanda ilanga, ngoko xa uhlwayela imbewu, kufuneka ukhethe iindawo ezinokukhanya imini yonke ukunceda izityalo zikhule ngcono. Ukongeza, imbewu kufuneka ihlwayelwe ngoFebruwari-Epreli, kuba ngeli xesha imozulu ishushu, ilungele ukukhula kwezityalo, musa ukuhlwayela imbewu ebusika, kuba ngeli xesha izityalo ziya kubanda kwaye zife ngokulula.
Hlwayela imbewu emhlabeni kwaye ugqume ngomaleko we-humus ukugcina ukufuma ukuze imbewu intshule. Emva kokuhlwayela, kufuneka unkcenkceshele izityalo, ukunkcenkceshela kuphela ngokwaneleyo.
Ngale ndlela yokusasaza, kufuneka uqaphele ukuba ungatyala imbewu kwi-tray kwaye emva koko uyifake emhlabeni okanye uhlwayele ngqo kwiimbiza:
Ukufukama kwembewu kwiitreyi: Kufuneka umhlaba usasazwe ngokulinganayo kwi-nursery tray okanye imbiza, emva koko hlwayelwa imbewu phezu komhlaba kwaye ugqume ngomhlaba obhityileyo okanye umgquba ukugcina umhlaba ufumile ukunceda imbewu intshule. Emva kweentsuku ezi-7 ukuya kwezili-15, izityalo ziya kuntshula kwaye ungazincothula izityalo okanye uzityale ezimbizeni.
Ukuhlwayela imbewu ngokuthe ngqo kwiimbiza: Emva kokuthenga, imbewu ifakwe emanzini afudumeleyo kwiiyure ezingama-3-4, ize ihlwayelwe kwiimbiza. Emva kweentsuku ezingama-50 ukuya kwezingama-70, iya kudumba. Ngexesha lenkqubo yokuhluma, kufuneka unakekele ukwenza iintyatyambo zibe zihle kwaye zifane.
Ukuba awukayazi indlela yokuthatha iiyure ezilishumi zokusikwa kweentyatyambo, nceda ukhawuleze ujonge le nkqubo ingezantsi:
Ukukhetha izisikwa: Kufuneka ukhethe isiphelo sesiqu okanye incam yomphezulu ukuze usasazeke ukunceda isityalo sikhule kakuhle. Qaphela ukuba akufanele ukhethe amasebe amancinci okanye amadala kakhulu. Emva koko sebenzisa isikere ukusika malunga ne-5-12cm ukusuka phezulu komzimba, kufuneka kubekho ubuncinane iliso elinye ekupheleni kokusikwa.
Ukuphatha ukusikwa: Ukusika kufuneka kususwe zonke iintyatyambo, amaqabunga kwisiqu. Amagqabi asezantsi adibana nomhlaba kufuneka nawo asuswe ukunqanda iintsholongwane zesityalo.
Ukutyala emhlabeni: Beka i-cut kumhlaba wokubumba kwaye ucinezele ngokuqinileyo malunga nesiseko ukuze uqinisekise ukuba iziqwenga zidibene kakuhle nomhlaba, okwenza kube lula ukukrazula. Xa ukusika kugqityiwe, amanzi rhoqo kwaye ubeke isityalo kwindawo enokukhanya kwelanga. Emva kweeveki ezi-1-2, izityalo zinokukhula iingcambu, ungahlwayela kwiibhedi okanye kwiimbiza.
Ubuchwephesha bokukhula kwiibhotile zeplastiki
Ukongeza kokutyala egadini okanye endleleni, ungasebenzisa iibhotile zeplastiki zangaphakathi ukuze ukhule iintyatyambo iiyure ezilishumi. Ngale ndlela unokuxhoma iibhotile zeplastiki ukuhombisa indlu yakho ngakumbi, ukwenza oku, unokulandela la manyathelo angezantsi:
Inyathelo loku-1: Ukusebenzisa ibhotile yeplastiki enkulu (i-2.25 ilitha), yinqumle ibhotile yeplastiki kwisiqingatha kunye nomlinganiselo we-1: 2. Kwaye ugxobhoze umngxuma omncinci kwi-cap cap ukuze uncede isityalo sifumane amanzi kakuhle kwaye sibe namandla okukhupha.
Inyathelo lesi-2: Beka umlomo webhotile esikiweyo emazantsi ukuze umlomo webhotile ube ngaphakathi ebhotileni.
Inyathelo lesi-3: Beka amanzi emazantsi ebhotile (ecetyiswayo nge-1/4 yamanzi) kunye nomhlaba ongaphezulu kwebhotile, kufuneka wanele ukwenzela ukuba xa uhlwayela, imbewu ayiyi kudlula okanye ichithe.
Inyathelo lesi-4: Fafaza imbewu phezulu kwaye ubeke kwindawo ekhanyiswe kakuhle ukuze izityalo zenze iphotosynthesize. Kufuneka uqwalasele rhoqo kwaye unkcenkceshele isityalo ukuze singomi.
Inyathelo lesi-5: Xa umthi ukhula kunye namasebe, uqhubela phambili ukuthena amagqabi kunye namasebe ukuze umthi ukhule amasebe kwaye uvelise iintyatyambo ezininzi.
Indlela yokunyamekela iintyatyambo kwiiyure ezilishumi ezintle unyaka wonke
Nangona sisityalo sokuhombisa ekulula ukukhula kunye nokunyamekela ekhaya, ukuze intyatyambo yeeyure ezilishumi iqhume kakuhle unyaka wonke, kufuneka ubeke ingqalelo kwezi ndlela zilandelayo zokunyamekela:
Ukukhetha umhlaba wokutyala
Iintyatyambo zentsimbi yeshumi ziyientyantyambo ezithanda imbalela, ngoko kufuneka uhlawule ingqalelo, khetha umhlaba onegunya eliphezulu lokukhupha amanzi. Ungathenga umhlaba wokubumba kwiivenkile zeentyatyambo okanye udibanise nomlinganiselo: 2/5 umhlaba + 2/5 isanti kunye ne-1/5 humus.
Iintyatyambo zentsimbi yeshumi ziintyatyambo ezithanda imbalela, ezifanelekileyo kwimozulu yaseVietnam, ngoko awudingi ukunkcenkceshela kakhulu, kodwa kufuneka uqinisekise ukufuma kwezityalo. Qaphela, ukunkcenkceshela kufuneka kunkcenkceshelwe ekuseni, akufanele kunkcenkceshelwe nge-8-10 ntsimbi kuba eli lixesha apho izityalo ziqhakaza.
Ukuze iiyure ezilishumi zikhule kwaye ziqhakaze ngakumbi nangakumbi ngokulinganayo, kufuneka ubeke ingqalelo kwindawo yesityalo. Iintyatyambo zentsimbi yeshumi ziintyatyambo ezithanda ukukhanya, ezifanelekileyo kwiindawo ezinokukhanya kwelanga. Ngoko ke, kufuneka ubeke umthi kwindawo ecacileyo: i-terrace, i-balcony, igadi, njl.
Xa utyala iintyatyambo, kufuneka ugawule rhoqo amagatsha amadala okanye abunile emthini, ezi zombini zinceda ukuqinisekisa i-aesthetics kunye nokunceda ukunciphisa izinambuzane kunye nezifo ezihlasela umthi. Ukongeza, ukuthena kukwanceda umthi ukuba ukhule amasebe amatsha kwaye unceda ekudaleni ubuhle kunye neentyatyambo.
Kuba isisityalo esinencasa, sikwintsapho ye-purslane, intyatyambo yentsimbi yeshumi isesichengeni sokuhlaselwa ziintshulube okanye iinkumba. Ukuthintela, kufuneka uhlambulule amasebe rhoqo, sebenzisa iziyobisi zokukhusela izityalo ukugcina umthi ungonakali.
Ukongezelela, xa kufika ixesha lokuvuna imbewu, ukuba awudingi ukusebenzisa imbewu, kufuneka uphinde uyisuse, ugweme imbewu yokuwa kunye nokugqithisa isityalo sikamama. Ngaloo ndlela, iya kucothisa ukukhula kwesityalo sikamama kwaye yenze kube lula ukuzala i-fungi ezinobungozi kunye nezinambuzane.
Vuna imbewu ukuze usasaze
Emva kokuba iintyatyambo zibunile, isityalo siya kuthwala isiqhamo, unokuvuna imbewu ukuze usasaze kwixesha elizayo. Sebenzisa izandla zakho ukwahlula iqokobhe langaphandle ukuqokelela imbewu esebenzayo, isiqhamo ngasinye siya kunika malunga ne-3 – 6 imbewu, emva kokuvuna, yizisa imbewu ukuze yome elangeni ukugcina ixesha elizayo.
Apho ukuthenga iintyatyambo ngentsimbi yeshumi?
Kubulela kwiimpawu kunye nentsingiselo yeentyatyambo ukuba iintyatyambo ze-10 zentsimbi zikhethwa ngabantu abaninzi. Nangona kunjalo, ukuba awuqinisekanga ukuba ungayithenga phi imbewu, ungaya kwangoko kwiidilesi: iimbewu ezingama-37, imbewu encinci, iPhuong Trung landscape co., Ltd., …
Ezi zingasentla ziidilesi ezibonelela ngeentlobo zeentyatyambo ezithembekileyo, ezisemgangathweni nezifikelelekayo onokubhekisa kuzo. Apha uya kuboniswana ngokukodwa ngabasebenzi malunga nendlela yokutyala, indlela yokukhathalela kunye nentsingiselo yomthi.
Enyanisweni, umfanekiso weentyantyambo ze-10 zentsimbi unxulumene nokuqhelana kunye ne-idyllic yeedolophana zaseVietnam ezivela kwixesha elidlulileyo, kunye neentyatyambo ezincinci, eziqaqambileyo, zihlala ziphakama phakathi kokhula ukuze zibonise imibala yazo. Ngethemba ngolwazi endisandula ukwabelana ngalo apha ngasentla, unokuqonda ngakumbi kwaye uzityale imbiza yeentyatyambo yentsimbi yeshumi eyanelisayo.
Bona ngaphezulu >> Top 100 izityalo ezintle zokuhombisa ekulula ukukhula eVietnam
Nguồn gốc và ý nghĩa của hoa hồng 7 màu | Hatgiongtihon.net
[Bạn Có Biết] 50+ Tên Các Loài Hoa Đẹp và Ý Nghĩa | Hatgiongtihon.net